राज्यमन्त्री मानन्धरद्वारा विश्व कीर्तिमान, यस्तो रेकर्ड राख्ने मानन्धर विश्वकै पहिलो मन्त्री « Lokpath
२०७७, १० पुष शुक्रवार १९:२६
राज्यमन्त्री मानन्धरद्वारा विश्व कीर्तिमान, यस्तो रेकर्ड राख्ने मानन्धर विश्वकै पहिलो मन्त्री
प्रकाशित मिति : २०७७, १० पुष शुक्रवार १९:२६
काठमाडौँ- शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले एकल गायनमा विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो सवा एक बजेदेखि गीत गाउन शुरु गरेका मन्त्री मानन्धरले लगातार ४ घन्टा ५ मिनेट २० सेकेन्ड गीत गाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् । उनले ५९ वटा गीत गएका हुन् । बालाजुस्थित अष्टनारायण चलचित्रहलमा विशेष कार्यक्रमबीच मन्त्री मानन्धरले विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
राज्यमन्त्री मानन्धरले वल्र्ड बुक अफ रेकर्ड युकेको बहालवाला मन्त्रीको एकल कन्सर्ट विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् । मन्त्री मानन्धरले सबै गीतहरुको रोयल्टीसमेत तिरेर गाएका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री मानन्धरले केही राष्ट्रिय गीत, आधुनिक गीत र नेवारी गीतहरु गाएका छन् । नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, प्रेमध्वज प्रधान, प्रकाश श्रेष्ठ, दीप श्रेष्ठ, तारा देवी, अरुणा लामालगायतले गाएको गीतको ट्रयाकमा मन्त्री मानन्धरले गाएका थिए ।
मानन्धरले ‘देशले रगत मागे मलाई बली चढाऊ’, ‘जहाँ छन् बुद्धका आँखा’, ‘ठूला ठूला महल होइन’ लगायतका गीत गाएका थिए । यो विधामा आयोजना गरिएको कार्यक्रम विश्वको पहलो भएकोले वल्र्ड बुक अफ रेकर्डमा पहिलोपटक राज्यमन्त्री मानन्धरको नाम लेखिएको छ । बेलायतमा मुख्यालय रहेको वल्ड बुक अफ रेकर्डले मन्त्री मानन्धरको प्रयास विश्वकै पहिलो भएको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री मानन्धरले नेपालको कला र संगीत विश्वलाई चिनाउने प्रयास गरिएको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकि पत्नी एवं प्रथम महिला राधीका शाक्यले राजनीति र गायन सङै अगाडि बढाउन सफल भएकोमा मन्त्री मानन्धरलाई बधाई दिईन् ।
आयोजक संस्थाका नेपाल अध्यक्ष सागर कटुवालले मन्त्री मानन्धर यो बीधामा गीत गाउने बिश्वकै पहिलो मन्त्री भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले मन्त्री मानन्धरलाई बिश्व रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
नेपालमा भोलिबाट कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन शुरु हुँदै, पहिलो खोप कस्लाई लगाइन्छ ?
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप भोलिबाट लगाउन शुरु हुँदैछ । माघ १४
काठमाडौं । विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल ‘केटू’ हिमालको जाडोयाममा सफल आरोहण गरी नयाँ
कस्ले प्रचार गर्‍यो नारायण वाग्लेले भन्दै नभनेको कुरा ?
काठमाडौं । पत्रकार, लेखक एवम् नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले आफूले भन्दै नभनेको
अमेरिका प्रवेश गर्न कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने
अब अनलाईनबाटै आवेदन दिएर लिनुहोस् एन आई सी एशियाको डेबिट…
कोरोनाका कारण साँघुरियो माने पर्व